वेबसाइटबाट कसरी आम्दानी गर्ने ? - Naya Patrika
वेबसाइटबाट कसरी आम्दानी गर्ने ?
नयाँ पत्रिका | साउन २७, २०७४
तपार्इं कुनै वेबसाइटमा निरन्तर सामग्री अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसका पछाडि तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, तपाईं यो काम रहरले गर्दै हुनुहुन्छ । दोस्रो, तपार्इं यसबाट आम्दानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तेस्रो, यसलाई तपार्इंको रहर र आम्दानी दुवैको स्रोत बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईंको वेबसाइटको उद्देश्य, वेबसाइटको व्यापारिक मोडेल, वेबसाइटमा राखिएका सामग्री र वेबसाइटको ट्राफिक (वेबसाइट हेर्ने मान्छे)को उचित व्यवस्थापनले वेबसाइटले गर्ने आम्दानी निर्धारण गर्दछ ।
तपाईले सञ्चालन गर्नुभएको वेबसाइटको उद्देश्य के हो ? त्यस विषयमा प्रस्ट हुनुहोस् । जस्तो कि तपार्इं कुनै संस्थाबारे जानकारी दिन वेबसाइटमा सामग्री राख्दै हुनुहुन्छ भने तपार्इंको वेबसाइटको उद्देश्य वेबसाइटबाट आम्दानी गर्ने होइन कि जानकारी दिने हो ।
वेबसाइटको बिजनेस मोडेल तयार पार्नुहोस् । सबै वेबसाइट एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । फरक प्रकृतिको वेबसाइटको व्यापारिक योजना अर्थात् बिजनेस मोडेल फरक हुन्छ । तपार्इं विज्ञापनबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ वा सेवा र वस्तुहरू बेच्न सक्नुहुन्छ कि अरूसँग आबद्धताका आधारमा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुराको निक्र्योल गर्नुहोस् ।
तपार्इंले विज्ञापन नै राख्नुहुन्छ भने कस्तो विज्ञापनमा केन्द्रीकृत हुने हो, त्यो विषयमा ध्यान दिनुहोस् । जस्तो कि, लोकल ब्यानर विज्ञापन, गुगल विज्ञापन, फेसबुक विज्ञापन वा अरू कुनै । यसरी पूरै व्यापारिक मोडेल बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपार्इंको वेबसाइट सफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
तपाईंको वेबसाइटको आम्दानी त्यतिवेला अत्यधिक हुन्छ, जतिवेला वेबसाइटको ट्राफिक अत्यधिक हुन्छ । तपार्इंले जति धेरै युनिक कन्टेन्ट (फरक सामग्री) राख्नुहुन्छ, त्यति नै ट्राफिक धेरै हुन्छ ।
तपार्इंले राख्ने सामग्री अरूको कपी–पेस्ट हुनुहुँदैन । यसो हुँदा तपार्इंको वेबसाइट सफल हुने सम्भावना घट्छ । तपार्इंको बिजनेस मोडेलअनुसार नै सामग्रीको छनोट गर्नुहोस् ।